Fa maninona no lasa malaza be ny rafitra fanaraha-maso lahatsary radar-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co, Ltd,
Fa maninona no malaza be vao haingana ny rafitra fanaraha-maso horonantsary radar
Fotoana: 2018-09-21 Hits: 29
Olana sy fanamby atrehan'ny fiarovana nentim-paharazana?
Ny vahaolana lehibe indrindra - — fanaraha-maso horonantsary, NSR100WVF
tombony:Ny fanaraha-maso horonantsary dia ampahany lehibe amin'ny rafitra fiarovana. Ampiasaina amina tranga maro izy io noho ny votoatiny fampahalalana intuitive, marina, ara-potoana ary manankarena.
Maharatsy azy:Miaraka amin'ny fanalehibeazana ny fampiharana dia hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fahitana amin'ny alàlan'ny fanairana diso, fanovana ny hazavana sy aloka, orana, oram-panala, setroka, fasika sy vovoka, fiovan'ny toe-javatra, fidiran'ny toe-javatra ary toe-javatra hafa, ary tsy fihetsehana izany.
Vahaolana ankehitriny — Fomba fanaraha-maso radar tokana
tombony: Ny radar MMW dia hita sy mikendry amin'ny alàlan'ny fandefasana sy fandraisana onjam-peo elektromagnetika avo lenta. Ny mody fanodinana entam-baravarankely dia mampiasa ny mariky ny echo mba hikajiana ny mombamomba ny fisiany, ny hafainganam-pandeha, ny lalana, ny halavirana ary ny toeran'ny zavatra mihetsika Radar-onjam-bolam-borona dia manana fahaiza-miaina mahery ao anaty zavona sy setroka ary vovoka, miaraka amin'ny toetrandro rehetra (afa-tsy ny orana) sy ny andro rehetra.
Maharatsy azy: Ny radar MMW dia matetika miresaka amin'ny radara ao amin'ny sehatry ny haavon'ny 30 ~ 300GHz (1 ~ 10mm) ny halavany. Ny halavan'ny MMW dia eo anelanelan'ny onja santimetatra sy onja maivana. Izany dia ahafahana mahita ny sary mazava sy intuitive ny kendrena, ka tsy azo atao ny manamafy ny endri-javatra tsara ananan'ny lasibatra nidirana. ,
Vahaolana fangarahan'ny radar mifototra amin'ny fanavaozana
Ny fampiharana voalohany ny fahitana Radar: MMW Radar sy Vision Fusion Systems, mampiasa tanteraka ny tombotsoan'ireo sensor, manome ny lalao tanteraka amin'ny herin'izy ireo manokana.
Ampidiro ny teknolojia haino aman-java-maranitra:Azony atao ny mampiasa tanteraka ny elanelan'ny elanelana misy amin'ny alàlan'ny fisavana radar sy ny tsanganana momba ny tanjona.
Ny tena singa amin'ny rafitra fanairana horonantsary fanaraha-maso horonantsary
Miaraka amin'ny fampivoarana ny fitaratry ny tambajotra, ny tamba-jotra ary ny faharanitan-tsaina ao amin'ny fiarahamonim-baovao ankehitriny, ny fanaraha-maso horonantsary nomerika dia manolo tsikelikely ny fanaraha-maso isankarazany ary ampiasain'ny olona eran-tany izany.
Ny rafi-pitondrana horonantsary dia mahatsapa ny fampidirana ny fanaraha-maso lahatsary sy ny fihaonambe, izay afaka mitantana ny fitaovana lavitra lavitra sy mahomby.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny zavatra fanaraha-maso lavitra amin'ny alàlan'ny firaketana horonan-tsary, playback, alika fampitandremana, ny famolavolana paikady fanaraha-maso sy ny toromarika vonjy maika, ny fanatanterahana ny asa roa miaraka amin'ny fanaraha-maso sy ny serasera, ary ny fitakiana ny fanaraha-maso lavitra sy ny didy vonjy maika amin'ny fifamoivoizana, ny sehatry ny solika, banky , ary azo tanterahina tanteraka ny fifandraisan-davitra.
Ambany ny tahan'ny fanairana sandoka:Tsy tratran'ny fiovan'ny hazavana sy ny alokaloka, ny orana, ny ranomandry, ny setroka, ny vovoka, ny fiovan'ny fivoarana ary ny fidirana.
Ambany ny tahan'ny tsy hita:Mihetsika sy fisorohana mavitrika izy io. Izy io dia manana ny teknolojia fitsirihana fitrandrahana fanavahana manavaka.
PREV: Inona no atao hoe Rafitra Fanaraha-maso Radar?
MANARAKA : Hatramin'ny 90m - —Fandrefana vaovao ho an'ny fisorohana ara-dalàna an'i UAF avy any Nanoradar